D-Cup 140 CM WM Dolls Nnukwu Anụ Ahụ Aaliyah Tan Skin
Save 21%$ 1,279.99$ 1,599.99
Akụkọ akụkọ ala:
Aaliyah bụ nwa bebi TPE nke nwoke na nwanyị nwere ogo 140 cm. Site na acha anụnụ anụnụ, m ruru n'okpuru uwe elu ya. Nke a bụ oge mbụ m kpọtụụrụ nwa agbọghọ, echekwara m na ọ na-ekwesi olu ike ozugbo ma wepụ aka m. Ọ baara mba, sị, "Gịnị kpatara i jiri mee nke ahụ." Azaghachi m, "Amaghị m, ọ dị ka ọ dị.